Wasiiro caan ka ah Dalxiiska oo lagu wado in ay ka hadlaan maalinta Dalxiiska Afrika
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Guddiga Dalxiiska Afrika » Wasiiro caan ka ah Dalxiiska oo lagu wado in ay ka hadlaan maalinta Dalxiiska Afrika
Guddiga Dalxiiska Afrika • Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Wararka Nigeria • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Wasiirka Dalxiiska ee Jamaica Edmund Bartlett ayaa ka mid noqon doona shanta wasiir ee dalxiiska ee ka hadlay dhacdada soo jiidatay shaqsiyaadka muhiimka ah si ay ula wadaagaan khibradooda iyo aragtida dalxiiska Afrika inta lagu jiro iyo ka dib faafitaanka COVID-19.
Shan wasiir oo caan ah oo dalxiiska ayaa lagu wadaa inay ka qaybgalaan, hadalka markaasi ka dib ayaa lagu wadaa inay ka qaybgalaan daabacaadda labaad ee Maalinta Dalxiiska Afrika oo loo qorsheeyay inay goor dambe ka dhacdo Lagos, caasimadda ganacsiga ee Nigeria subaxnimadii Jimcaha.
Daabacaadda Labaad ee Maalinta Dalxiiska Afrika (ATD) ayaa ka dhici doonta caasimadda ganacsiga ee Nigeria laga bilaabo Noofambar 25 ilaa Noofambar 26, 2021.
eTurboNews waxay si toos ah u socon doontaa maalinta Dalxiiska Afrika, akhristayaashana waxay ka soo qaybgeli karaan Zoom-ka.
Dhacdada waxaa iska kaashanaya Guddiga Dalxiiska Afrika iyo Shabakada Dalxiiska Adduunka
Wasiirka Dalxiiska ee Jamaica Dr. Edmund Bartlett
Wasiirada kale ee lagu wado inay ka qeyb galaan xaflada ayaa kala ah Moses Vilakati, Wasiirka Dalxiiska iyo Arimaha Deegaanka ee Boqortooyada Eswatini, Hon Phildah Nani Kereng, Wasiirka Deegaanka, Kheyraadka Dabiiciga ah, Ilaalinta iyo Dalxiiska ee Botswana.
Kuwa kale waa Dr. Memunatu Pratt, Wasiirka Dalxiiska iyo Arrimaha Dhaqanka ee Sierra Leone iyo Dr. Damas Ndumbaro, Wasiirka Khayraadka Dabiiciga ah iyo Dalxiiska ee Tansaaniya.
Wasiirkii hore ee Dalxiiska iyo Dhaqanka ee Jamhuuriyadda Seychelles iyo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Guddiga Dalxiiska Afrika (ATB) Hon. Alain St. Ange waa shakhsiga kale ee caanka ka ah warshadaha dalxiiska ee Afrika si uu uga qayb galo ka dibna ka hadlo munaasabadda maalinta dalxiiska Afrika.
Guddoomiyaha Guddiga Dalxiiska Afrika (ATB) Mudane. Alain St. Ange
Guddiga Dalxiiska Afrika Guddoomiyaha fulinta Mr. Cuthbert Ncube ayaa sidoo kale lagu wadaa in laga wadahadlo kadibna la wadaago arrimaha khuseeya dalxiiska iyo hiddaha Afrika ee hodanka ah inta lagu guda jiro munaasabadda ATD.
Guddoomiyaha Fulinta ee Guddiga Dalxiiska Afrika Mr. Cuthbert Ncube
Munaasabadda ATD ayaa sidoo kale soo jiidatay dalxiisayaasha dalxiiska ee qaarada Afrika, Maraykanka, Yurub iyo wadamada kale ee aduunka si ay uga wada hadlaan, u wadaagaan fikrado wanaagsan oo ay ku beddelaan khibradahooda qani ah ee hababka ugu wanaagsan ee gacan ka geysan doona horumarinta ka dib suuq-geynta dalxiiska Afrika iyo guud ahaan Afrika ee suuqyada dalxiiska ee caalamka.
Isagoo xambaarsan mowduuca “Isgoysyada Dalxiiska, Ganacsiga iyo Joogteynta, Muhiimada u ah Afrika, Inta lagu jiro iyo Xilligii ka dambeeyay COVID-19”, Munaasabadda Labaad ee Maalinta Dalxiiska Afrika waxay muujin doontaa hidaha iyo adeegyada hodanka ah ee laga bixiyo waaxda dalxiiska Afrika.
Guddiga Caalamiga ah ee Ururka Caalamiga ah (IOC) ayaa ku dhawaaqay martigelinta daabacaadda labaad ee maalinta dalxiiska Afrika, taas oo la qorsheeyay in la qabto gabi ahaanba.
Maalinta Dalxiiska Afrika waxaa loo qoondeeyay in diiradda la saaro qaarada Afrika oo ah dhacdo qaarad ah, taas oo kulmisa dawladaha, hay'adaha shirkadaha, daneeyayaasha iyo kuwa kale ee silsiladda qiimaha dalxiiska si wax looga qabto arrimaha saameeya qaybta.
ATD waxaa loo naqshadeeyay markaas in ay keento shakhsiyaad muhiim ah oo dalxiiska ah oo ay ku jiraan siyaasad-dejiyayaal heer qaran ah, daneeyayaasha ganacsiga, booqdayaasha iyo ciyaartoyga kale ee dalxiiska u dabbaaldegaya qaninimada Afrika, ayay tiri Ms. Abigail Adesina Olagbaye oo ka tirsan Shirkadda Horumarinta Dalxiiska iyo Horumarinta ee Desigo.
Ujeedooyinka ATD, iyo kuwa kale, waa in ay u dabaaldegaan oo ay muujiyaan Afrika marxaladda caalamiga ah, xoogga eclectic ee dhaqamada kala duwan iyo hantida dalxiiska, hidaha iyo kartida dhammaan nuxurka macnahooda, qurux iyo dabeecad, ayay tidhi Marwo Abigail.
Xafladan ayaa sidoo kale isu keeni doonta dadka Afrikaanka ah ee qurbaha ku nool iyo dalalka kale ee Afrika, saaxiibada Afrika si ay u qiimeeyaan qiimaha ay leedahay warshadaynta oo wax weyn ka tarta horumarka dhaqaalaha oo shaqo abuur, dakhli abuur iyo horumariya hab-nololeedka iyo bulshooyinka qaaradda.
ATD-da sidoo kale, waxay wanaajisaa oo diiradda saari doontaa gudaha waaxda dalxiiska Afrika waxayna keeni doontaa safka hore, caqabadaha iyo arrimaha carqaladeynaya kobaca dalxiiska iyo horumarka.
Waxay sidoo kale khariidad u samayn doontaa xalalka koritaanka, barwaaqada iyo horumarinta mustaqbalka ee waaxda dalxiiska, gaar ahaan kor u qaadista joogtaynta iyo ilaalinta.
Maalintani waxay ku dhiirigelin doontaa jiilka soo socda aqoonta iyo qaddarinta hidaha dhaqanka iyo dabiiciga ah ee Afrika, sidoo kale waxay abuurtaa oo fududayn doontaa isku xidhka "Africa for Africans" iyo saaxiibada Afrika taas oo suurtogal ka dhigi karta in rajada dalxiiska ee qaarada ay u rogaan fursado ganacsi iyo maalgashi.
Ka qaybgalayaasha maalinta Dalxiiska Afrika waxay noqon doontaa qayb taariikhda ka mid ah ka dibna waxay markhaati ka noqon doonaan daabacaad kale oo xiiso leh oo ah dhacdo saxeexa Afrika oo u qoondaysay maalinta qaaradaha si sannad kasta loo xuso dalxiiska iyo waxtarka baaxadda leh ee uu ku leeyahay dhaqaalaha Afrika.
Maalinta ayaa sidoo kale qorshayn doonta dariiqooyin loogu talagalay kobaca dalxiiska iyo horumarinta qaaradda Afrika, ka dibna la isu keeni doono ganacsiga, maalgashiga, fursadaha isku xidhka ee daneeyayaasha gudaha iyo dibadda warshadaha.
Ka qaybgalayaasha munaasabadda sidoo kale, waxay heli doonaan aqoon iyo ficillo loo baahan yahay si ay u qaataan marka ay khuseyso dalxiiska, ganacsiga, waaritaanka iyo isbeddelka cimilada.
Dhaqdhaqaaqyo dhowr ah ayaa lagu xusayaa Maalinta Dalxiiska Afrika oo la filayo in ay ka dhacdo wadamo kala duwan oo Afrikaan ah iyada oo loo marayo baahinta casriga ah.
Maalinta Dalxiiska Afrika ayaa la daahfuray sanadka 2020 (sanadkii hore) iyadoo ay ka soo qeyb galeen 79 wadan iyo 21 qof oo ku hadla afka 11 wadan.
Riix halkan si aad ugu biirto shirka Zoom